Izindaba - Umcamelo, iyithuluzi lokulala.
Umcamelo, iyithuluzi lokulala. Ngokuvamile kunenkolelo yokuthi umcamelo uyisigcwalisi esisetshenziswa abantu ukuze bathole induduzo yokulala. Kusukela ocwaningweni lwesimanje lwezokwelapha, umgogodla womuntu, osuka phambili uwumugqa oqondile, kodwa umbono oseceleni uyijika elinamagobe amane okuphila. Ukuze kuvikelwe ukugoba okujwayelekile komzimba kwentamo, ukugcina imisebenzi evamile yokuphila lapho abantu belele, ukulala kuzosetshenziswa imicamelo. Umcamelo ngokuvamile wakhiwa izingxenye ezimbili: umcamelo core kanye pillowcase.
Ukuma okunengqondo kwekhanda emcamelweni lapho ulala kubaluleke kakhulu, ngokuvamile, ikhanda libekwe kangcono endaweni ephakathi komcamelo, ukuze umuntu akwazi ukuzinzisa ukuma kokulala, ukugwema izinguquko ezivamile ekumeni ebusuku okubangelwa umcamelo, njll.; okwesibili ukuvumela intamo ukuthi ibe namandla athile okusekela, ukugcina ijika elivamile lomzimba womzimba, ukuma okujwayelekile kokulala kuyikhanda eliphansi phakathi komcamelo, intamo emaphethelweni omcamelo, umcamelo uzokwenza. ube entanyeni Dlala indima esekelayo, ngeke ibangele ingcindezi emgogodleni womlomo wesibeletho. Uma impahla yomcamelo inganwebekanga, indawo ephakathi komcamelo ingenziwa isicaba, umcamelo wentamo ugoqeke, ukuze umgogodla womlomo wesibeletho ungagobi phambili, noma ugoqeke ohlangothini, ukuze ulondoloze indawo efanelekile yokunwetshwa emuva, ukuze kuse phezulu. ngeke ubuhlungu wesibeletho.
Indlela yokukhetha umcamelo womlomo wesibeletho, umcamelo okahle, into eyisisekelo kunazo zonke ukwenza umcamelo usondelene eduze nokugoba komzimba womgogodla wesibeletho, ukuze abantu abasebenza, abafundela futhi baphile usuku olulodwa bangakhulula ukukhathala kwemisipha yomlomo wesibeletho. kanye nemisipha ngesikhathi sokulala.
Njengamanje, kunezindlela ezihlukahlukene zokwelashwa komgogodla womlomo wesibeletho. Ngokombono wokusetshenziswa isikhathi eside, umcamelo womlomo wesibeletho ungalandelwa futhi usetshenziswe iziguli isikhathi eside. Ngakho-ke, ukukhetha umcamelo ofanelekile womlomo wesibeletho nokunamathela kuwo isikhathi eside ngokuqinisekile kuzosiza umgogodla wakho womlomo wesibeletho ululame.
Ngokombono wemithi yendabuko yamaShayina kanye nokusetshenziswa kwabantu, i-gypsum iyabanda. Umcamelo owenziwe nge-gypsum ungalawula ukukhuphuka komfutho wegazi ngokubanda nokushisa, futhi ukusetshenziswa okuqhubekayo kunganciphisa kancane kancane umfutho wegazi ube sezingeni elivamile. Ngaphezu kwalokho, umcamelo we-plaster uklanywe ngokwejika lentamo yomuntu. Ayigcini nje ngokuphakamisa ikhanda, kodwa futhi isekela umgogodla womlomo wesibeletho, ukuze kuqinisekiswe ukugoba okujwayelekile komzimba komgogodla womlomo wesibeletho. Kamuva, umsebenzi wokugcwalisa intamo uzinzisa ukugoba ngokomzimba komgogodla womlomo wesibeletho, odlala indima enhle ekwelapheni ngokomzimba kwe-spondylosis yomlomo wesibeletho.